Tattoo kaynta, loogu talagalay dabeecadaha jecel | Tattoo
Tattoo kaynta loogu talagalay dadka jecel dabeecadda iyo nolosha caafimaadka leh
Susana godoy | | Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta
Haddii uu jiro tattoo aan waligay jeclaa oo i cajab galiya inaan ku arko maqaarka dadka, waa markay ku sawiraan kaynta maqaarkooda. Haddii tattoo si fiican loo sameeyo, mararka qaarkood xitaa waxay u egtahay sawir. Waxaan si gaar ah u jecelahay keymaha habeenkii halkaasoo hooska madow ay doorka ugu weyn ku leeyihiin.
Waxaa jira dad doorta keymo ay geedo dhigtaan, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwa ku raaxeysta ku darista waxyaabo kale qaabeynta, sidee bay u noqon karaan xayawaan habeenle ah, yey, xiddigo iwm. Haddii aad jeceshahay tattoos-ka muuqaalka dhirta ama guud ahaan dabeecadda, waxay u badan tahay in jardiinooyinka keymaha ay sidoo kale yihiin waxaaga.
Tattoo-kaynta badanaa waxay astaan ​​u tahay jacaylka qofku u dareemayo nolosha iyo dhanka dabiiciga. Waana taas dadku inay ku sugan yihiin adduun mahaddeeda iyo geedaha iyo kaymaha awgeed waxay siiyaan hawo nadiif ah oo ku filan dhammaanteen oo ku neefsada oksijiinta.
1 Tattoo ah qayb ka mid ah dabeecadda
2 Tattoo dabiiciga ah, sixir yar
3 Xoogaa astaan ​​ah
4 Xagee laga helaa tattoo tattoo
5 Tattoo kale dabeecadda
5.1 Tattoo tattoo
5.2 Tattoo sawirada buuraha
5.3 Tattoo tattoo kaynta
6 Sawirada sawirka kaynta ee gacanta
7 Sawirro taatuuga kaynta lugta
Tattoo ah qayb ka mid ah dabeecadda
Kaymaha waxay ka mid ahaayeen dabeecadda xitaa ka hor intaan dadku jirin. Tani waxay soo bilaabatay waqtiyadii hore, ee ay noolaayeen waxyaalaha nool ee qadiimiga ahaa ... keymaha ayaa ahaa guryaha ay ku noolyihiin. Tan awgeed Dad badan, kayntu waa meel quduus ah.
Waxay astaan ​​u tahay nolosha, degganaanta, soo noolaynta iyo waxyaabo kaloo badan. Macnaha kayntu way sii ballaaraneysay oo way sii xoogeysanaysay iyadoo waqtiga la qaadayo taasna waxay ka dhigan tahay in waqtiyada casriga ah, keynta wali macnaheedu tahay waxyaabo badan, waana sababtaas darteed ... waa fikrad fiican in lagu sameeyo tattoo
Kaymaha noloshooda way ku badan yihiin oo sirtooda ayaa na faideysa. Kaymaha waxaa loola jeedaa waxyaabo badan hal qof iyo qof kale, waana iska soo horjeed. Awoodda farshaxanka ayay ku jirtaa inay sameysato tatuubo qurux badan oo macnahu ha xoog yeesho. Xitaa nooca geedaha loo doortay naqshadeynta waxay yeelan karaan macnayaal ka duwan haddii noocyada kale ee geedaha la doorto.
Waxaa jira dad doorbidaya in la isku daro noocyada geedaha si ay u yeeshaan macno kala duwan iyo in calaamaddu ka ballaaran tahay. Dadka kale waxay doorbidaan inay ku daraan waxyaabo sameeya naqshadeynta oo aad u xiiso badan iyo macnaha ugu qoto dheer.
Kaymaha iyo geedaha waxay aad ugu egyihiin nolosheena ... waxaan fursad u leenahay inaan kulano wareegyo qaab caqabado iyo xitaa xusuus ah. Waxay la barbar dhigi kartaa xilliyada geedaha iyo isbeddelladooda muddo kadib. Tusaale ahaan, xilliga dayrta waa wakhti xasilloon oo nabdoon, ka dib waxaa yimaada xilliga qaboobaha oo u muuqda inay wax walba dhinteen ... laakiin markaa kadib waxay la imaanaysaa guga dib-u-dhalasho iyo rajo, oo ay weheliso quruxda iyo farxadda xagaaga ee hadhow iman doona.
Xilliga sanadka ee sawirka la sawiray ayaa sidoo kale macno cusub u siin kara tattooka oo xitaa sheekeyn kara. Sawirku wuxuu yeelan karaa faahfaahin badan oo kala duwan, laakiin wuxuu kaloo yeelan karaa macno qoto dheer.
Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan tattoosyadan ayaa ah in markii la dhammeeyo, awood u yeelashada in laga fikiro ay hadiyad u tahay indhaha. Waxay umuuqataa sixir inagu caawinaya inaan fiicnaano oo aan isu qaadno meeshaas, halkaas oo aan ku sameyn karno baaritaankeena damiirka, halkaas oo aan ku kori karno kana fiicnaan karno. Waxaa jira nashqado ruuxi ah oo ka badan kuwa kale, sidoo kale waxaa jira qaar ka mugdi badan, si aad u badan oo ay kugu keeni karaan cabsi. Muhiimadu waa sida nashqadda aad dooratay ay kuu dareento.
Tattoo dabiiciga ah, sixir yar
Dad badan, tattoo ee kaynta waxay yeelan kartaa nuxurka sixir gaar ah, maxaa yeelay kumanaan sano kaymaha had iyo jeer waxay ahaayeen halyeeyada sheekooyinka, halyeeyada iyo xitaa cibaadooyinka.. Kaymaha waxaa had iyo jeer ku noolaa sixir, ruuxi ruuxi ah ... ama xitaa fiirinaya dhinaca kale ee lacagta ... xayawaan cabsi leh oo habeenkii uun u soo baxa si ay u cabsiiyaan dhibbanayaashooda.
Laakiin xaqiiqda ayaa ah in tattoos-ka kayntu ay tahay wado lagu raaxeysto xiriirka ay noolaha oo dhami la leeyihiin Hooyada Dunida, si loogu laabto asalkeenna, si loo xusuusto inaan dhammaanteen mid nahay, dabeecadduna tahay gurigeenna.
Xoogaa astaan ​​ah
Tattoo-kaynta ayaa isu keeni kara macnayaal iyo astaamo kala duwan, sida nadiifinta webiga ama xoogga buuraha. Waxaa laga yaabaa adiga adiga inay sidoo kale macnaheedu tahay sharafnimada qoryaha geedaha.
Tattoo-yadaas, macneyaal iyo astaamo kala duwan ayaa isku soo ururaya, sida nadiifinta koorsada webi ama durdur iyo sidoo kale xoogga buuraha iyo sharafta qoryaha geedaha. Laakiin sida wax walba, macnaha iyo astaamaha astaamaha kaynta waxay ku xirnaan doontaa waaya-aragnimadaada iyo waxa kugu dhacay nolosha.. Waxaad awoodi doontaa inaad hesho macnahaaga gaarka ah ee laga yaabo inuusan noqon mid aad u faraxsan oo dhaqaaqa laakiin waa wax ka sii xun oo cabsi badan ... sida cabsida kali ahaanta kaynta dhexdeeda adoon garanayn meel loo baxo, qabow, harraad, gaajo iyo maqal sawaxan aan caadi ahayn.
Xagee laga helaa tattoo tattoo
Tattoo kaynta sidaad u maleyn karto, waa tattoo u baahan meel iyo shaqo badan. Waxaan kugula talinayaa in farshaxanka sameeya tatuuga uu yahay xirfadle kaa dhigaya naqshad aad ansaxiso ka hor inta aadan bilaabin sameynta sawirka, marka waxaad ogaan doontaa in sawirka aad kuheli doonto maqaarkaaga weligiis, uu noqon doono a sawiro inaad runtii jeceshahay oo aad ku raaxaysatid inaad fiiriso marar badan.
Tattoo-gu wuxuu ku habboon yahay ragga iyo dumarka, maxaa yeelay waxay ku xirnaan doontaa dhadhankaaga shakhsi ahaaneed midka aad dooratid hal tattoo ama mid kale. Ragga ragga ah waa wax qurux badan oo haween ah, in kasta oo cabbirka laga yaabo inuu ka yar yahay, haddana sidoo kale wuu ku fiicnaan karaa.
Midda ugu caansan ayaa ah in qaab-dhismeedka noocan ah ee loo yaqaan 'tattoos' lagu sameeyo meelo ballaaran ama dherer ah oo jirka ah sida dhabarka, bowdada ama gacanta.
Tattoo kale dabeecadda
Marka lagu daro Tattoo kaynta, oo aan wada ognahay, fikraddu waxay noo oggolaanaysaa inaan ku raaxaysanno xulashooyin kale oo aad u ansax ah. Dabcan, maahan oo keliya fikradda laakiin sidoo kale dabeecadda lafteeda yaa go'aamisa. Haddii aad jeceshahay, waxaa laga yaabaa in xulashooyinka soo socda sidoo kale lagu dari doono mashaariicdaada soo socda ee lagu fulinayo maqaarkaaga.
Kaymaha ayaa ka mid ah meelaha noloshu ka jirto, sidoo kale waa sixir. Sheekooyinka sayniska iyo tacaburrada ayaa ka muuqan kara tattoo noocan oo kale ah. Waa sidee Hagaag, oo leh sawirro geedo waaweyn oo mugdi ah oo lagu daray noolaha habeenka, bisha buuxda ama kuwa ruuxiga ah.
Khad madow ayaa aasaas u ah dhameystirka naqshad sidan oo kale ah. Aagagga ay ka mid yihiin gacanta ama lugaha ayaa noqon doona shiraacyada ugu wanaagsan ee nolosha siin kara geedo madow iyo qalalan.
Tattoo sawirada buuraha
Nabadda iyo xasilloonida ayaa ah laba astaamood oo lagu raaxeysan karo ttattoos leh muuqaal muuqaal ah oo buuro leh. Waxaa la yiraahdaa markaan rabno inaan doorto nasashada, waxaa ugufiican inaan iska ogolaanno inay iyagu wataan, oo ku biiraya cirka iyo quruxda gees walba.
Labada gacmood, dhabarka ama bawdada labaduba way fiicnaan doonaan si loo muujiyo dulqaadashada shaqada sidan oo kale ah. In kasta oo ay run tahay in sidoo kale loo qaabeyn karo aagagga sida curcurka, iyadoo loo eegayo dhadhankaaga.
Tattoo tattoo kaynta
Geedaha, in kastoo aan leenahay noocyo badan, badanaa waa kuwo dhaadheer, waaweyn oo caleen leh. Tan iyo waagii hore waxay ahayd geed ilaah aad u jecelyahay. Si la mid ah, xitaa cananaaska wuxuu ka mid ahaa halyeeyadii xafladaha Bacchus qaarkood. Marka, waxaas oo dhan, la yaab ma leh inay sidoo kale sii waddo inay ka dhex muuqato fikradaheenna markay timaaddo shaatiga.
Dabeecadda iyo dhaqanka ayaa isu imaan doona si ay nolol u siiso dhammaan noocyada naqshadaha, laakiin had iyo jeer geedaha sida jilaaga. Sidaa awgeed, aagag badan oo jidhka ah ayaa sidoo kale loo doortaa si looga dhex arki karo quruxdooda oo dhan.
Sawirada sawirka kaynta ee gacanta
Waa run in qof kastaa doorto naqshaddiisa, laakiin markaan ka hadlayno tattooska kaynta ee gacanta, waxaa badanaa lagu arkaa qayb ka mid ah gacanta. Waxay dabooli karaan aagga curcurka ama hareeraheeda oo dhan. Mararka qaarkood waxaan ku raaxeysan karnaa tattoos-biyoodka si aan nolol dheeraad ah ugu siino naqshad sidan oo kale ah ama aan u dooranno khad madow dhammaantood.
Sawirro taatuuga kaynta lugta
Sida for tattoos kaynta lugta, waxaad sidoo kale dooran kartaa naqshado kala duwan iyo in aqlabiyaddu dhabarka dambe ka daboosho. Maxuu noqon lahaa midka aad ugu jeceshahay dhammaantood?
Miyaad horeyba u ogayd sababta aad u rabto tattoo-kaynta, maxaad u dooneysaa xagee ka heli doontaa? Noo sheeg!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Tattoo kaynta loogu talagalay dadka jecel dabeecadda iyo nolosha caafimaadka leh
Runtii waxaan kuhayaa dhul duud ah oo kuyaala gacanta bidix iyo qoyaan aan xad laheyn oo leh erayga JACAYL NOLOL oo Isbaanishka macnihiisu yahay waan jeclahay nolosha, marka hadii keynteyda ay ogolaato xad dhaafkayga, taasi waa in aan dhaho waan jeclahay dabeecadda waligey maxaa yeelay waa ku mahadsantahay waan jirnaa… ..
Robert Medrano dijo
Sidoo kale waxaan helay tattoo kaymo dhintay 3 bilood ka hor gacanta midig iyo kiiskeyga, waxaan sameeyay nashqadeynta kaynta dhimatay maxaa yeelay waxaan marayaa marxalad noloshayda ah halkaas oo aan si sax ah u dareemayo habkaas, qalalan, nolol la'aan. Mararka qaarkoodna waxay ii sheegaan in maalin uun ay wax waliba hagaagi doonaan oo tattoo-kani aanu wax shaqo ah ku lahayn, laakiin jawaabta aan ka bixiyaa had iyo jeer waa inaadan iloobin heerarka xun ee nolosha maxaa yeelay markaad xusuusato waa markaad ka fikirto inaadan samayn Waxyaabo isku mid ah markale.Qaladaad isku mid ah oo kugu hogaamiyay inaad sidan noqoto.
Ku jawaab Roberto Medrano
Tattoo-ka oo kor u qaada isku-kalsoonaanta: 5 tusaalooyin fiican